Dijitalụ na Direct pụtara Omenala na High Street n'oge ọrịa
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Dijitalụ na Direct pụtara Omenala na High Street n'oge ọrịa
Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • nzukọ • News • ndị mmadụ • Ịrụ ọrụ • Tourism • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ UK na -agbasa
Nke a bụ nghọta na-adọrọ adọrọ banyere ka teknụzụ dị irè - n'echiche sara mbara - bụ n'oge ọrịa na-efe efe dị elu.
Teknụzụ dijitalụ jere ụlọ ọrụ ahụ nke ọma karịa nhọrọ ọdịnala n'oge ọrịa Covid-19, na-ekpughe nyocha ewepụtara taa (Monday 1 Nọvemba) site na WTM London na Travel Forward.
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị isi 700 sitere na gburugburu ụwa sonyere na mkpesa Industrylọ Ọrụ WTM ma gwa ha ka ha tụọ arụmọrụ nke teknụzụ na ọwa dị iche iche. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọkara ihe nlele (47%) kwuru na ọwa ahịa dijitalụ dị ka njikarịcha search engine, ọchụchọ akwụ ụgwọ na ahịa email dị ezigbo mma n'oge ọrịa a, yana 30% ọzọ na-akọwa ha dị ka ezigbo mma. Naanị 6% kọwara ha adịghị arụ ọrụ.
N'ụzọ dị iche, naanị 25% nke execs kwuru na ndị ọrụ njem n'okporo ụzọ dị oke mma n'ịkwado azụmahịa ha n'oge nsogbu ahụ, yana ntakịrị karịa (31%) na-ekwu na ha dị oke mma. Ọnụ ọgụgụ buru ibu (16%) kwuru na ndị ọrụ okporo ụzọ dị elu adịghị arụ ọrụ.
N'ikwu okwu n'ozuzu, ọwa ndị na-ere ahịa na-arụ ọrụ kachasị ike n'oge ọrịa a. A kọwara saịtị weebụ ika, ngwa na ebe kọntaktị dị ka nke ọma ma ọ bụ dị irè site na ihe karịrị 70% nke nlele ahụ, ọnụ ọgụgụ na-achụpụ ha dị ka ndị na-adịghị arụ ọrụ dị na pasentị otu mkpụrụ.
N'ụzọ dị iche, mgbasa ozi ọdịnala dị ka mbipụta, TV na ozi ozugbo dị nnọọ irè ma ọ bụ dị irè maka ihe na-erughị 50%, mana pasentị dị elu - 17% - wepụrụ ọwa ndị a dị ka adịghị arụ ọrụ.
N'ebe ọzọ, a jụrụ execs kpọmkwem gbasara usoro teknụzụ abụọ tupu oge Covid. Igwe ojii dị irè maka ihe karịrị ọkara ihe nlele (52%), ọ bụ ezie na ndị na-ere ahịa igwe ojii na ndị na-ahụ maka akaụntụ ga-enwe mmasị ịchọpụta ihe mere otu onye n'ime mmadụ iri chere na igwe ojii adịghị arụ ọrụ. N'otu aka ahụ, API - ngwanrọ na-enye ohere ka usoro abụọ na-emekọrịta ihe - dị irè maka ihe karịrị ọkara ihe nlele mana ọ ka na-arụ ọrụ maka 8%.
Agbanyeghị, otu kachasị daa ogbenye bụ ụlọ akụ akwa na ndị na-achịkọta ihe, na-erughị ọkara (48%) na-ekwu na azụmaahịa ndị a na-akwado n'oge ọrịa a, ọkwa nkwado kacha ala nke ọ bụla na ndepụta ahụ. Ọzọ, obere obere - 13% - wepụrụ ha dị ka ndị na-adịghị arụ ọrụ.
N'ụzọ dị iche, ihe kachasị mma iji teknụzụ na-arụ ọrụ bụ nkwurịta okwu, yana ma ndị ọrụ na ndị ahịa. Ihe karịrị 80% nke ihe nlele ahụ kwuru na ngwaọrụ ndị a dị irè maka ojiji nke ime, ebe naanị 4% na-ekwu na ngwaọrụ ndị a dara mkpụmkpụ. Iji teknụzụ na-agwa ndị ahịa mpụga okwu rụrụ ọrụ nke ọma maka ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ atọ n'ime anọ (74%), yana naanị 6% enweghị afọ ojuju.
Simon Press, Onye isi ngosi ihe ngosi, WTM London na Travel Forward, kwuru; "Nke a bụ nghọta na-adọrọ adọrọ banyere ka teknụzụ dị irè - n'ụzọ sara mbara - bụ n'oge ọrịa a na-efe efe. Ọ na-egosi na mpaghara teknụzụ ka na-ekewa na ụfọdụ teknụzụ na / ma ọ bụ ọwa na-adabaghị maka nzube na ịdaba n'ihe achọrọ, ebe ndị ọzọ yiri ka ha pụtara na nkwado zuru ụwa ọnụ.
"WTM London na nwanne ya nwanyị lekwasịrị anya na teknụzụ na-egosi Travel Forward nọ ebe ahụ iji nyere ụlọ ọrụ njem aka ịchọpụta ụdị teknụzụ ha chọrọ yana onye ha na ha ga-emekọ ọnụ iji wughachi njem."